Nahoana Ireo Sinoa Mpanao Aterineto No Mino Ny Tondrom-pandrefesana Entam-barotra Iray ho Afaka Haminaniana ny Toe-draharaha Erantany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2019 8:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, Italiano, русский, Español, English
Hetsipanoherana iray nataon'ireo “Gilet Jaunes” (salotra mavo) tao amin'ny faritany Frantsay, Haute-Saone, tamin'ny Novambra 2018. Sary an'i Obier avy amin'ny Wikimedia Commons. CC: AT-NC.
Talohan'ny Krismasy, tao amin'ny media sôsialy Sinoa, niparitaka be ny tsaho iray mikasika ny fihanaky ny hetsipanoheran'ny “salotra mavo” Frantsay ho any amin'ireo firenena Eoropeana hafa.
Nipoitra ny tantara taorian'ny fanambaràn'ny Filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ireo elanelam-panahy sasantsasany hiatrehana ny fitarainan'ireo mpanao fihetsiketsehana mikasika ny politika ara-toekarena. Raha niandrandra ny hiverenan'ny fitoniana sy filaminana i Macron, naminavina ny mifanohitra tamin'izay ny tsaho noforonin'ireo Sinoa.
Marobe ireo dika notsoahana avy amin'ilay tantara no niparitaka avy tamin'ny alàlan'ireo kaonty fanoratana blaogy madinika tao amin'ny Weibo sy Wechat, mitanisa an'ireo loharanom-baovao avy amina mpamongady iray an'ireo vokatra fototra ao Yiwu— tanàna iray fantatra tsara amin'ny maha ivontoeram-pivarotana ambongadiny azy – izay nanambara fa tapitra ny tahirinà “salotra mavo” tao amin-dry zareo ary mbola maro ireo fangatahana mipoitra avy amin'ireo firenena Eoropeana toa an'i Soeda, Pragy, Soisa, sy ny sisa. Adikan'ny tantara fa mihanaka manerana ny tanibe ireo fihetsiketsehana “salotra mavo”.
Inty ny dika iray amin'ilay tantara izay niparitaka tamin'ny Weibo sy ny WeChat:
[tondrom-pandrefesana Yiwu] Nasehon'ny tatitra fikarohana Yiwu mikasika ny fitafiana fa nitohy nitombo isa hatrany ireo fanafarana “salotra mavo” ataon'i Eoropa. Nanao ora ambony ampanga ireo mpanamboatra mba hamaliana ny fangatahana ary hetsika fanararaotra hitadiavana tombony no fahitan'ireo mpivarotra amin'ny vovonana e-commerce avy any ampitan-dranomasina azy io. Vinanian'ireo sinoa mpanao aterineto fa, miainga avy amin'ireo singam-pandrefesana an'i Yiwu sy ny angondrakitra goavana ananany, hihanaka any Soeda, any amin'ny Repoblika Tseky, any Soisa ary Espaina ny hetsiky ny salotra mavo. Manipika ireo media avy any ivelany fa ny tondrom-pandrefesana ny Yiwu dia mety ho afaka haminaniana ireo firehana politika erantany. Azo ampiasaina hijerena ny fironan'ny daholobe ireo fanafarana akora fototra avy any amin'ireo tsena ivelany ary hahafahana, araka izany, haminaniana tsy misy tomika ny vokatr'ireo fisehoan-javatra ara-politika. Tamin'ny taona 2016, miainga avy amin'ny fanafarana t-shirt sy ireo sainam-pirenena nisy fifandraisany tamin'ny resaka fifidianana, ireo mpanamboatra tao Yiwu dia naminany fa i Donald Trump no handresy ao Etazonia, efa dimy volana nialoha. Araka ny voalazan'ireo mpanaramaso, ireo orinasa mpamokatra fitafiana ao Yiwu dia efa nanomboka nahazo fanafarana entana avy any Etazonia ary nanomboka namokatra sainam-pirenena sy t-shirts ho an'ireo mpanohana an'i Trump mandritra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2020. Betsaka lavitra noho ireo fangatahan'ny mpanohana ny antoko demokraty. Nanomboka naminany ireo sasantsasany fa mbola ho voafidy i Trump. Mampiseho ny herin'ny angon-drakitra voavana ananan'i Shina io.
Marobe no namerina nibitsika ireo vaovao miaraka aminà fanehoankevitra toy ny hoe “lasa fototra iray haminaniana an'ireo firehana erantany ny Yiwu” sy ny hoe “topazo maso ireo angondrakitra momba ny fanondranana entana ao Yiwu dia mety ho lasa mpanadihady ireo raharaha erantany ianao”.
Ny anganonganon'ny tondrom-pandrefesana Yiwu
Ao amin'ny faritanin'i Zhejiang no miorina i Yiwu, ivon-toerana erantany goavana indrindra mikasika ny fivarotana an'ireo akora fototra ary iray amin'ireo tsena manao ambongadiny tena malaza be ao Shina. Manana Ananan'ny tanànan'ny varotra iraisam-pirenena Yiwu ny tondrom-pandrefesana iray antsoina hoe Tondrom-pandrefesana an'ireo akora fototra an'i Yiwu Shina izay ahitana taratra ireo firehana eny amin'ny tsena.
Nandritra ireo fifidianana amerikana tamin'ny taona 2016, nanjary lohahevitra mafana teo amin'ireo media sosialy sinoa ny tondrom-pandrefesana Yiwu, satria ny adihevitra mikasika an'ireo rakitahiry miresaka ny fanafarana entana tao Yiwu mifandraika amin'ireo fifidianana dia sahala amin'ny toa milaza fa i Donald Trump no nalaza kokoa noho i Hillary Clinton. Taorian'ireo fifidianana, na ireo media an'ny fanjakana aza dia nitatitra fa nisy hery faminaniana ireo rakitahirin'ny fanafarana vokatra avy ao Yiwu ary Alibaba, ary marobe ireo teratany sinoa nino fa nitombina kokoa ny tondrom-pandrefesana an'ny Yiwu raha mitaha amin'ny fitsapankevitra nataon'ny amerikàna. Nanao fanamarihana haingana ireo mpanaramaso sasantsasany ny media fa mametraka olana ity fandikana ity, nahazo vato betsaka kokoa noho i Trump i Clinton, saingy natao tsinontsinona io fanadihadiana io.
Tamin'ity indray mitoraka ity, ny Global Times mpilaza vaovao ambany fiahian'ny fanjakàna, dia nanamarina ny tantara tamin'ny tambajotra ary nilaza fa tsy lany akory ny tahirin'entana “salotra mavo” tao amin'ilay tanàna mpamatsy, sady tsy ambony noho ny tamin'ny taona lasa akory ny habetsahan'ireo varotra tamin'ireo volana lasa iny. Na izany aza, tsy nisy vokany ny tatitry ny Global Times mba hanajanonana ny fihanak'ilay anganonganon'ny Tondrom-pandrefesan'ny Yiwu. Raha ny marina, fanehoankevitra vaovao no nipoitra taorian'ny Noely, nanamafy ny hery faminaniana ananan'ny tondrom-pandrefesana Yiwu. Ny tantara, naverina navoaka indray tany amin'ireo vovonana isankarazany an'ireo media anaty tambajotra, dia nahalala fa diso ireo tarehimariky ny fandraharahana salotra mavo ireo, saingy mbola nikiry biby nanohy ihany hoe ny tondrom-pandrefesana Yiwu dia naminany tamim-pahombiazana ireo vokatry ny fifidianana filoham-pirenena amerikana tamin'ny taona 2016 sy ny ho Tompondaka Erantany 2018…
Nanisy akony ny lahateny nambaran'ny filoham-pirenena sinoa Xi Jinping tamin'ny 18 desambra teo ny mpanoratra, mikasika ny faha 40 taonan'ny “fanovàna sy ny fisokafan”ny” firenena, izay nitanisàna ny Yiwu ho toy ny ohatra iray mahomby amin'io fanovàna io. Nofintinin'ilay fanehoankevitra fa ny herin'ny vinavinan'ny tondrom-panrefesana Yiwu dia nanaporofo ny tantara manan-dazan'ny fiovàna teo amin'ny firenena.
Ny antony izay mety mahatonga ny Yiwu “haminavina marim-pototra” ny fironan'ny raharaha anerantany, hatrany hatrany, dia noho ny fandraisana anjaran'ireo mponina ao Yiwu nandritra ireo folo taona farany. Nanaraka zotra manokana izy ireo mikasika an'ireo tsena erantany amin'ireo vokatra fototra ary nandrafitra sata ‘fitantanana ny tanàna mba ho ivontoerana fanamboarana an'ireo filàna andavanandro manerantany.
Ny politikan'ny fisokafana sy ny fanovàna no nanampy an'ireo tanàna marobe toa an'i Yiwu hanao dingana feno fahasahiana ary hitolona ho tafita. Nahafahana niantoka ny fanavaozana goavana an'i Shina tao anatin'ny 40 taona monja ny ezaka nataon'izy ireo.
Io fisafotofoton'ny tanjaky ny faminavina nananan'ny tonrom-pandrefesana Yiwu io, miaraka amin'ny fiovàna ara-toekarena tao Shina no nahatonga ilay anganongano ho mbola sarotra fafàna.